HomeAfaan OromooHaleellaan Sudaan jabaateera, Daandiin Qilleensa Itoophiyaa balalii gara Kaabaatti dhaabe.
Haleellaan Sudaan Itoophiyaa Irratti Geessiftu Jaabaatee Lafa Dabalataa To’atte.
Waraanni Sudaan magaalaa #Salaambar jedhamu guutummaa guutuutti barbadeessuun qabate. Waraanni ammas ittuma fufee deemaa kan jiru yoo tahu, Korhumerii(Xefere Warq) fi Abderaafii qabachuuf yeroo ammaa waraana gaggeessaa jira. Jiraattotni naannoo kanaa buqqa’anii baqachaa kan jiran yoo tahu, qabeenyaan midhaanii fi beeyladootni hedduun waraana Sudaaniin fudhatamanii jiru. Guyyaa har’as RIB fi milishaan dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamanii jiru. Uummatni nagaan ajjeefamuu fi madaa’uunis baramee jira. Abiyyitt aduun dhiite.
Daandiin qilleessa itoopiyaa sodaa nageenyaa keessa gale!
Humni waraanaa Sudaan Daandii qilleensaa Kaaba Itoophiyaa, Humaraa, Laalibalaa, Gondar fi Bahardaar xiyyeeffannoo misaayelaa jala galchuun barame. Waraanni Sudaan taarkaanfii kana kan fudhate ega Magaala #Abduraafii (Mi’iraab Armaahacoo) fi #Mantaa_Wuhaa jedhaman irratti loltoota Itoophiyaa 50 ajjeesee lafa haaraa bal’aa qabatee booda.
Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu sababa haala qillesnsaatiin jedhus, haalli qillensaa yeroo Bonaa naannoo kanaa garuu hedduu mijataa dha.